Vavaka fanaovana Batemy. ? Amin'ny maha-zazalahy sy zazavavy ary Corta [miendrika lakroa]
Vavaka hatao batisa Amin'ny maha zazalahy sy zazavavy azy, lainga fohy sy mahafinaritra amin'ny hoe ny batisa dia hetsika ara-panahy madio ary eo am-piterahantsika finoana izay nohamafisina tamin'ny alalan'ny vavaka.
Na manao ahoana na manao ahoana na manao ahoana na manao batisa azy, ny finoana dia zavatra tsy misy ifandraisany amin'ny fahanterana fa miaraka amin'ny antso izay tsapa avy ao am-po, ny vavaka dia ampiasaina hanamafisana io antso io ary mba hahafahana mitondra mivoaka avy ao am-po amim-pinoana sy amin-kerim-po.
Manoloana ny batisan'ny zazakely dia atao toy ny asan'ny finoana izy ireo izay ameloman'ny ray aman-dreny hatry ny fahatanorana dia ny fitiavana ny asan'ny Tompo.
1 Vavaka hatao batisa
2 1) Vavaka ho an'ny fifankatiavan'ny zazavavy
3 2) Vavaka ho an'ny batisan'ny zaza
4 3) Vavaka ho an'ny fanasana kristiana
5 4) Vavaka fanao krismasy
6 5) Vavaka ho an'ny batisa anaty hazofijaliana
6.1 Inona ny vavaka atao batisa?
6.2 Tena mahery vaika ireo fehezanteny ireo?
Ny zava-dehibe amin'ireo rehetra ireo dia vita amin'ny faharesen-dahatra sy ny fahalalana rehetra. Ny vavaka atao amin'ny batisa dia azon'ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny na ny olona hafa ao amin'ny fianakaviana na namana izay miara-mipetraka amin'ny antso natao.
1) Vavaka ho an'ny fifankatiavan'ny zazavavy
Ry Ray malala malala, tonga eo anatrehanao anio izahay hanolotra ny fiainanay (anaran'ny zazavavy).
Ho fankasitrahana ny fanomezana ny fiainany ao amin'ny fianakavianay, ary ho fankatoavana ny herinao sy ny fahendrena lehibe anananao, dia miantso ny fitahianao amin'ny fiainany anio.
Enga anie izy tovovavy salama sy matanjaka ary salama; Enga anie izy hitombo amin'ny fahendrenao sy ny fitarihanao mandra-pahatongany ho vehivavy toa an'i Maria Renin'i Jesosy.
Enga anie ianao nofidin'ny zanakao vavy mba hotanterahinao ny tanjonao eto an-tany. Izay manaiky ny sitraponao, izay mahalala ny hidera anao, hanompo anao ary tia anao.
Avy eo izy mahita ny fankasitrahanao isan'andro isan'andro amin'ny fiainany, fa hahazo ny fitahianao sy ny voninahitra ary ny harenao izy.
Manana ny ampahany malemilemy sy malefaka ny zazavavy izay mampiavaka azy ireo ary izany no antony anaovana ny vavaka ho an'ny batisa ho azy manokana. Ny fanamby izay atomboka amin'ny fiainana amin'ny fahazazana dia mety hatanjaka ary rehefa mandray fanapahan-kevitra ny hanao batisa azy ireo sy ny tenany rehefa mianatra ny vavak'izy ireo dia avelantsika ao anaty fitaovana mahery vaika izay azon'izy ireo ampiasaina amin'ny hoavy.
2) Vavaka ho an'ny batisan'ny zaza
Mpanjakan'ny Mpanjaka sy Tompon'ny Tompon'izao rehetra izao, eto alohan'ny fanatrehanao be voninahitra aseho eo alohanao ny ain'ny zanakay (ny anaran'ny zaza).
Misaotra indrindra Andriamanitra noho ny nijerenay anay fa mety ho ray aman-dreny amin'ity zaza mahafinaritra ity. Mampanantena izahay fa hikarakara anao sy ho tia anao ary hitarika anao amin'ny lalan'ny fiainana tsara. Nefa tonga koa isika ankehitriny hitady ny fitahianao mandritra ny androm-piainanao.
Enga anie ka ho tonga "Sakaizan'Andriamanitra" toa an'i Mosesy mpanomponao izy. Enga anie ianao hahafantatra tsy ho ela ny tanjonao amin'ny fiainana, enga anie ka tsy hanaiky ny rafitr'ity tontolo ity ianao fa hanao ny sitrakao mba hahombiazana tanteraka. Enga anie ka halemy fanahy izy hanaiky ny fampianaranao ary ho hendry hanaiky fa ianao, Andriamanitra, no zava-drehetra. Izany dia takatra amin'ny literatiora sy ny lalàna, mahay teny, tia tanindrazana lehibe ary mpitarika.
Misaotra azy noho izany ny voninahitry ny anaranao izay ambonin'izy rehetra.
Manana ny vavak'izy ireo manokana ihany koa ny ankizy satria matetika ny lalan'izy ireo eo afovoan'ny fitomboana dia mety misy fiantraikany amin'ny antony marobe izany ary izany no antony mahatonga ny vavaka batisa ho an'ny ankizy ho fihetsika maneho fitiavana, finoana ary lahateny. Ny tenin'ny Tompo dia miresaka amintsika ny momba ny fampianarana ny zaza sy ny lalan'ny Tompo hatramin'ny fahatanorany, ka izany no mahatonga ny fiangonana amin'ny fitiavana sy ny fanaterana fiainana feno fotoam-pankasitrahana miaraka amin'Andriamanitra Ray ary miaraka amin'ny Ireo olona masina rehetra
3) Vavaka ho an'ny fanasana kristiana
Misaotra an'Andriamanitra noho ny nanomezany ahy fiainana.
Misaotra an'i Dada sy Neny tamin'ny nanoro ahy ny lalana.
Misaotra ny fianakaviako tamin'ny nanomezany ahy ny fitiavan'izy ireo.
Misaotra an'ireo mpanohana ahy noho ny fanaraha-maso ny fanasitranany.
Manasa anao amin'ny batisako ianao amin'ny alahady 22 mey amin'ny 1:00 tolakandro ao amin'ny Temple of Our Lady of Poor. Dia miandry anao hisakafo ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny misy ao amin'ny Plan Street ao San Luis 117. Misaotra anao.
Tena zava-dehibe ny fananana ny fianakaviantsika sy ny namantsika. Noho izany, tsy maintsy mivavaka isika mba hanasana anao am-pifaliana.
Izany no antom-bavaka ho an'ny fanasana kristiana. Azonao atao ny mampiasa azy io malalaka amin'ny fanasana ny batisanao.
4) Vavaka fanao krismasy
Andriamanitra mendrika, voninahitra sy voninahitra anie, anao irery ihany no Mpamorona ny fiainana.
Eto izahay dia eo alohan'ny fanatrehanao mba hitahy ny fiainan'i (ny anaran'ny zaza/ ninã), izany zaza tsara tarehy izay omenao anay lahy.
Misaotra anao izahay, ka anio, atombohy amin'ny fitarihanao sy ny fiarovana ny fiainanao. Enga anie hitombo ny zanakay hahafantatra fa ny Fanahy Masinao no sakaizany indrindra. Enga anie ny fiainany hanana tanjona mandrakizay toy ny fiainan'i Abrahama; ary izay toa azy, mahareta miandry amin'ny fahatanterahan'ny fampanantenan'Andriamanitra, izay mino ny teninao sy ny fampianaranao, ka dia hampifaly an'Andriamanitray ny fonao.
Zava-dehibe, zanaka salama, salama ary matanjaka, ho voninahitr'Andriamanitra.
Mahery ny vavaka, na manao ahoana na manao ahoana na fohy, dia ny tena zava-dehibe amin'ny finoana namboarina.Ny Baiboly dia misy ohatra maro izay azontsika resahina momba ny fehezanteny fohy izay voavaly haingana. Izany no tokony hokatsahintsika. Misy ny vavaka lava tsy misy finoana sy vavaka fohy izay mahery, izany dia miankina amin'ny finoana anananao fa tsy amin'ny fotoana haharetana.
5) Vavaka ho an'ny batisa anaty hazofijaliana
Vavaka hatao batisa anaty hazofijaliana
Raha te hivavaka amin'ny Batisa vonona hanao pirinty ianao, omentsika azy ireo ambony eo ambony endrika lakroa. Izany no zavatra tsara tarehy hitanay. Hararaoty tanteraka!
Inona ny vavaka atao batisa?
Manampy antsika ny vavaka manadio ny fanahy sy ny fanahintsika Hanavao izany mandritra ny fizotran'ny vavaka rehetra satria mila fotoana sy fitokanana azy ho fanatsarana ny fanahy. Hatramin'ny fotoana vonona ny hivavaka isika dia manomboka hisy fiantraikany amintsika, satria ny manome ny fotoantsika amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra dia tsara lavitra noho ny sorona hafa azontsika atao. Momba ny batemy dia vao mainka aza atao satria ny fanoloran-tena ara-panahy dia atao eo anatrehan'Andriamanitra.
Ny vavaka fanaovana batisa dia hanomana ny fanahintsika amin'ny asa tokony hatao. Raha ao anaty zanaka ny batisa dia afaka mangataka ny ho avy isika, mba hitarihan'Andriamanitra foana ny diany ary mitazona azy ireo akaiky ny vala izy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Tena mahery vaika ireo fehezanteny ireo?
Ny vavaka rehetra Ny atao amin'ny finoana dia mahery tokoa ary izany indrindra no antony nahatonga azy ireo ho fitaovam-piadiana ara-panahy izay azontsika ampiasaina foana na aiza na aiza misy antsika ary na inona na inona fahasarotana ny fangatahantsika.
Ny vavaka dia mety hampitsangana ny maty hiala amin'ny fasan'izy ireo araka ny hitantsika ao amin'ny tenin'i Jesoa Kristy Andriamanitra ao amin'ny ohatr'i Lazarosy fa efa andro maromaro izy no maty ary tamin'ny teny iray ihany no nivelona.
Dios, farany, Santos